बुर्तिवाङका हरि अर्यालको ४ जिपिए::Online News Portal from State No. 4
बुर्तिवाङका हरि अर्यालको ४ जिपिए
बागलुङ, १३ असार – यस बर्षको एसईई परीक्षा बिहिवार सार्वजनिक भएको छ । यस बर्षको परीक्षामा बागलुङको बुर्तिवाङका हरि अर्यालले ४ जिपिए ल्याएर उत्कृष्ठ बन्न सफल भएका छन् । मध्यम परिवारमा हुर्केका ढोरपाटन नगरपालिका वडा नं.२ का अर्यालले बुर्तिवाङ स्थित न्यु मोडेल एकेडेमीमा अध्ययन गर्थे । उनले ४ जिपिए ल्याएको प्रअ दिपक कुँवरले जानकारी दिए ।
कुँवरका अनुसार अर्याल बिद्यालय तहमै निकै चलाख बिद्यार्थीमा गनिएका थिए । उनको प्रतिभा देखेर पहिला देखिनै धेरैले उत्कृष्ठ हुने बताएका थिए । बिहिवार ढीला गरी परीक्षाफल हेर्दा उनको ४ जिपिए देखिएको उनले बताए । अर्यालका बाबु बोमलाल बैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् भने आमा घरमै बसेर कृषि पेशा गरिरहेकी छिन् । अर्यालले डाक्टर बन्ने सपना बोकेकोले पहिलो चरणमा बिज्ञान संकाय पढ्ने बताएका छन् ।
नाबालक परिचयपत्र लिने धेरै
जनतासंग जनप्रतिनिधि अभियान संचालन
शालिकराम मृत्यु, रवि र न्यायका कुरा के हरेक ब्यक्ति एउटाको पक्षमा लाग्नै पर्दछ ? मलाई...
निशर्त अनुदान हट्दा स्वास्थ्य सेवा प्रभावित बागलुङ, ५ भदौ – कर्मचारी कटौतीको निहुँमा गत बर्षदेखि...
पर्यटन बर्ष सफल बनाउन बरेङले थाल्यो आन्तरिक तयारी बागलुङ, ५ भदौ – नेपाल भ्रमण बर्ष सन् २०२०...